Raisulwasaaraha Soomaaliya oo Sheegay in Al-shabaab Laga Adkaan Doono - Latest News Updates
Raisulwasaaraha Soomaaliya oo Sheegay in Al-shabaab Laga Adkaan Doono
Ra’isulwasaare Xasan Cali Khayre oo Warbaahinta Qaranka kala hadlay Shacabka Soomaaliyeed kadib markii uusoo kormeeray isbitaallada iyo goobtii Shabaab soo weerartay ayaa u mahad celiyey Ciidammada Qalabka Sida ee Soomaaliyeed ee bad baadiyey dadkii Shabaab guryagooda ku qabsatay.
Wadooyinka qaar ee Magaalada Muqdisho, ayaa maanta xiran, waxaana ku sugan ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo gaadiidka dagaalka ku jaray wadooyinka.
Isgoysyada, Howlwadaag, Tarabuunka, wadada KPP illaa Isgoyska Sayidka ee Magaalada Muqdisho, dadkana waxa ay yihiin kuwa lugeynaya.
Gaadiidka dadweynaha ayaa saakay waxaa loo diidayey iney kasoo gudbaan dhanka wadada Wadnaha, soona aadaan dhanka wadada Makka Al-mukarrama.
Boqolaal ka mid ah dadka reer Muqdisho ayaa lagu geynaaya Wadooyinka Magaalada Muqdisho, maadaama aan la ogoleyn in wadooyinka ay maraan Gaadiidka dadweynaha.
Waa maalintii labaad oo ay xiran yihiin Wadooyinka Muqdisho, waxaana sababta lagu sheegay in ay tahay in wali lagu jiro Howlgalkii Qaraxyadii Arbacaddii Habeenkeedii ka dhacay Muqdisho.